मुख्य कारोबारी जोगाउन चलखेल, ३४ करोड धरौटी बुझाउन नसक्दा अभियुक्त थुनामै
असोज २७, २०७४| प्रकाशित ००:५२
वीरगञ्ज- हरिओम ट्रेडिङका सञ्चालक कुलप्रसाद राजभण्डारीसँगै फार्म दर्ता गराउने प्रकाश घिमिरे गत भदौ २० मा पक्राउ परे। उनीहरुकै सूचनाका आधारमा सिआइबीले सल्लाहकार विनोद गुप्तालाई काठमाडौंको कुलेश्वरबाट नियन्त्रणमा लियो। भारतीय नागरिक उनी काठमाडौंमा बसेर ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्थे। उनीपछि राजकुमार राजभण्डारी पनि प्रहरीको फन्दामा परे।
अन्तशुल्कका नक्कली स्टीकर कारोबारमा यसअघि संलग्न समेत पाँच जना धरौटी बुझाउन नसक्दा अहिले थुनामै बसिरहेका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जले उनीहरुबाट जनही ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँका दरले झन्डै ३४ करोड जरिवाना माग गरेको छ।
हिमालयन ट्रान्सपोर्ट मार्फत भारतबाट आयात गरेको वस्तु वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जाँचपास गर्ने क्रममा ८६ हजार ४ सय ७० थान अन्तशुल्क स्टिकर भदौ १८ गते बरामद भएको थियो। अन्तशुल्क स्टिकर व्यापारीले हरिओम ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडको नाममा गैरकानुनी तरिकाले भित्र्याएको बुझेपछि प्रहरीले संलग्नलाई पक्राउ गरेको हो।
भन्सार स्रोतका अनुसार भारतीय नागरिकद्वारा सञ्चालित हिमालयन ट्रान्सपोर्ट यसअघि पनि अवैध सामान बोकेर ल्याउँदा पटकपटक दण्डित भइसकेको छ। बरामद स्टिकर महँगा मदिरामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
समातिएका सबैलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयको आग्रहमा सिआइबीले वीरगञ्ज पठाएको थियो। सिआइबीलाई यस प्रकरणबाट अगल पारेपछि नक्कली स्टीकरका मुख्य कारोबारीलाई बचाउने खेल भएको मदिरा उद्योगीले आशंका गरेका छन्।
बरामद स्टिकर जनकपुरको एउटा डिस्टिलरीले मगाएको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि पनि त्यो उद्योगले पटकपटक नक्कली स्टिकरमा कारबाही भोगिसकेको छ। ‘सिआइबीले पक्राउ गरी पठाएका अभियुक्तमाथि मुद्दा चलाउनु बाहेक कर कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेको छैन,’ एक मदिरा उद्योगी भन्छन्, ‘नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बचाउने उद्देश्यले सिआइबीलाई अभियुक्त पक्रनमै सीमित राखियो।’
नक्कली स्टिकर र त्यसलाई मगाउने फर्मका सञ्चालक र ढुवानीकर्ता पक्राउ परेको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कुन उद्योग वा कसले कहाँ लान मगाएको बारे कर कार्यालयलाई कुनै जानकारी छैन।
आन्तरिक कर कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख कर अधिकृत तारा भुसाल मुद्दा टुंग्याउन अझै समय लाग्ने बताउँछन्। ‘नक्कली स्टिकर कसले मगाएको भन्नेबारे केही खुलेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक रुपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।'
पक्राउ परेका विनोद गुप्ता सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशमा रिहा भएका थिए। उनी छुटेलगत्तै सरकारी लिखत कीर्ते अभियोगमा पुनः पक्राउ परे।
कर कार्यालयका अनुसार असोज १७ गते थुनछेक आदेश जारी गरी धरौटी माग गरिएको हो।
कार्टुन खसेपछि छताछुल्ल स्टिकर
अवैध रुपले भारतबाट ल्याउँदै गरेको अवस्थामा भन्सारले ०६८ चैत २२ गते मेन गेटबाट अन्तशुल्क स्टिकर बरामद भएको थियो। वीरगञ्ज छपकैयाका मेघराज कुशवाहले बोकेको कार्टुनसहित भुइँमा खस्न पुग्दा अन्तशुल्क स्टिकर सडकमा छताछुल्ल भएको थियो। बयान अनुसार एक कार्टुन ओसारेबापत उनले दुई सय रुपैयाँ पाउँथे।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार उक्त ट्रान्सपोर्टले आयात गरेको सामान चेकजाँचका क्रममा २५ युपी शक्तिको १ सय ८० एमएल मदिरा बोतलमा टाँसिने ६७ हजार ३ सय ७० थान र ७ सय ५० एमएल बोतलको २५ युपी शक्तिको १९ हजार १ सय १० थान अन्तशुल्क स्टिकर फेला परेको थियो।
रक्सीमा प्रयोग गरिएको भए यसबाट एक करोड ९७ लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क सरकारलाई घाटा हुन्थ्यो। सो रकमको १३ प्रतिशत भ्याट पनि सरकारले गुमाउँथ्यो। नक्कली स्टिकर छाप्नु भनेको नक्कली पैसा छाप्नुसरह नै हो। ट्रान्सपोर्टका प्रतिनिधि वीरेन्द्र महतो सहित बरामद स्टीकर थप अनुसन्धानका लागि भन्सारले आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्ज बुझाएको थियो।
कानपुर र दिल्लीमा छपाइ
नक्कली स्टिकरको अवैध कारोबार गर्नेले भारतको कानपुर र दिल्लीबाट स्टिकर छपाउने गरेका छन्।
हाल इन्डोनेशियाबाट आउने अन्तशुल्क स्टिकर यसअघि भारतमा छपाएर नेपाल आउँथ्यो। स्रोतका अनुसार केही कारोबारीले अहिले पनि त्यही पुरानो भारतीय कम्पनीबाट अन्तशुल्क स्टिकर छपाउन लगाएर नेपाल भित्र्याउने गरेका छन्। उद्योगले मदिरा उत्पादन गरेपछि कर कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीले उद्योगमै अन्तशुल्क स्टिकर उपलब्ध गराउँछन्।
फितलो अनुगमनका कारण नक्कली स्टिकरको कारोबार भइरहेको व्यापारीहरुको भनाइ छ।
कर कार्यालयबाट अन्तशुल्क स्टिकर लगाउने कर्मचारी हाकिमको तजबीजमा वा ठूलै भनसुन गराएर उद्योगमा गएका हुन्छन्। नक्कली र सक्कली स्टिकरबीच धेरै भिन्नता नभएकाले बजारमा गइसकेपछि उपभोक्तालाई छुट्याउन मुस्किल पर्छ।
मदिरा र बियरको प्रत्येक बोतलमा तथा चुरोटको बट्टामा प्रयोग हुने अन्तशुल्क स्टिकर गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने भएकाले छपाइका लागि विदेश लैजाने गरिएको हो।
आयकरको नयाँ व्यवस्था लागू, तपाईँले कति तिर्नुपर्छ कर?
उपत्यकाको मेट्रोरेल प्राथमिकतामा, कहाँकहाँ बन्दैछन् रेलमार्ग?
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिवाना, यस्तो छ मापदण्ड
विकास निर्माणका आयोजनामा विदेशबाट पनि सापटी ल्याउन पाइने, यस्ता छन् ८ सर्त